The Three Amigos - Ukufaka i-Order
Izinhlangano zingawathola kanjani ama-tape
Bhalela ku info@thethreeamigos.org Izinhlangano zokusakaza kuuyomele zicacise i-NTSC or PAL formats. Ama-tape amaningi athunyelwayo a-BetaSP. I-DigiBeta iyatholakala kodwa imali yokukhokhela i-tape kungalindeka ukuthi ikhokhwe.
Ngakube izinhlangano zokusakaza kuyomele zikusakaze kanjani loluhlelo?
Loluhlelo lwenzelwe ukuba lubukelwe izikhathi eziningana. Izihnlangano zokusakaza kuyomele zilusakaze izinyanga eziningana. Kuyiqiniso ukuthi ukusakazwa kanye kwaloluhlelo kanye kungeze kwadlulisa umlayezo. Izinhlangano zokusakaza kumele zidlale izigcawu ezahlukene ngesikhathi esingafani.
Ngakube ikhona inkokhelo uma usakaze i-The Three Amigos
Ikuphi okumele kwenziwe izinhlangano yokusakaza
Izinhlangano zokusakaza ziyanxuswa ukuthi zethumele i-email ku-info@thethreeamigos.org kanye neminingwane emayelana nesibalo sezigcawu ezizosetshenziswa, isikhathi kanye nezinsuku zokusakaza kanye nesibalo sabantu abalindeleke ukuba babukele.
Izinhlangano zokusakaza zingathumele imibono evela kubantu, ingaba emihle noma emibi.
Ngakube ama-NGO kanye nezinhlangano zemiphakathi zingakwazi yini ukuthola ama-tape
Yebo ngokuthi zibhalele ku-info@thethreeamigos.org. Owamaningi nokho ama-VHS tapes. Abawadingayo kumele bacacise ukuthio bafuna i-NTSC noma PAL formats. Akuzona zonke izicelo ezingaba impumelelo
Ngabe abantu bangakwazi ukuzifakela izicelo zokuthenga ama-tape
Ngeshwa isibalo samatape sincane kanti ngeze futhi athunyelwa kubantu ngabodwana
Ithini imithetho yokushicilela
Ayikho imithetho nemibandela ekhona ezinhlanganweni zokusakaza. I-Tape ingadlalwa yonke noma ingxenye yayo ngaphandle kwezindleko
Ngeze wakwazi ukuqopha noma ucaphune ezinye zezinto ku-tape ngaphandle kokuthola imvume
Imifanekiso kuyomele idlalwe njengoba injalo ingashintshwa. Akukho kuguqulwa kwamagama okuvumelekile ekuqaleni kanye nasekugcineni kwe-tape